ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၇-၈-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၇-၈-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- တပ်သိမ်းမြေယာကိစ္စ ဖြေရှင်းမပေးနိုင်လျှင် တပ်နှင့်ပြည်သူ သွေးကွဲနိုင် click
- စစ်အစိုးရလက်ထက်က အာဏာပိုင်တချို့ လယ်မြေတွေ သိမ်းယူ click
- ကြေးနီစီမံကိန်း ဧက ၅,ဝဝဝ ကျော်အတွက် လျော်ကြေးပေးဖို့ ဆန္ဒပြတောင်းဆို click
- လယ်သမားအရေး ဆွေးနွေးပွဲကို တောင်သူ ၃ဝဝ ကျော် ဖိတ်ကြား click
- ဘားအံ မြို့မအားကစားကွင်း ပြန်လည်ရရှိရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်း click
- အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကဏ္ဍ ဦးရွှေမန်း ပြော click
- အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ပါဝင်ပူးပေါင်းဖို့ သူရဦးရွှေမန်း တိုက်တွန်း click
- အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လက်ရေးမူစာအုပ် ပြန်လည်ပေးအပ် click
- ဗိုလ်ချုပ်လက်ရေးမူ ပြန်လည်ပေးအပ်ပွဲ (ရုပ်သံ) click
- ကင်တားနား ချင်းပြည်နယ် သွား click
- မြန်မာဓာတ်ငွေ့ တရုတ်ဓာတ်ငွေ့ထက် ဈေးသက်သာမည် click
- အယူမတူသူတွေကြား ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေး ခရီးစဉ် click
- ဦးဇောတိကနဲ့ ဟာဂျီဦးအေးလွင် VOA နဲ့ မေးမြန်းခန်း (ရုပ်သံ) click
- ရိုဟင်ဂျာပါတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း - ၂ (ရုပ်သံ) click
- မြန်မာ့ရေးရာ အိန္ဒိယလမ်းစဉ် click
- ရန်ကုန်လေဆိပ် အဆင့်မြှင့်ဦးမယ် click
- Ooredoo ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး မြန်မာနိုင်ငံသားကို ခန့်မည် click
- ထိုင်းရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု click
- မော်လမြိုင်- မုတ္တမတံတား (ရုပ်သံ) click
- မလှိုင်မြို့နယ် ကျောက်တန်းကျေးရွာက "ဘက" ကျောင်း (ရုပ်သံ) click
- မယ်စကြဝဠာနဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်း (ရုပ်သံ) click
- အီဂျစ်မှာ စစ်တပ်ကို အာခံ ထပ်ဆန္ဒပြ click
- အီဂျစ် ထပ်တိုးသပိတ် အခြေအနေ ဆိုးရွား (ဓာတ်ပုံ) click
- အီဂျစ် အကြမ်းဖက်မှု ၇၀ ကျော် ထပ်မံသေဆုံး click
- အီဂျစ်မှာ ဆန္ဒပြသူ နောက်ထပ် ၈၀ ကျော် သေကြေ click
- အမေရိကန်အမျိုးသမီးတွေ သိပ္ပံကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားလာအောင် ကြိုးပမ်းချက် click
- တရုတ် သေဒဏ်ကျ အကျဉ်းသားများဆီက အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ရယူမှု ရပ်နားမယ် click
- ဖိလစ်ပိုင် သင်္ဘောမှောက်မှု လူ ၂၀၀ ကျော် ပျောက်နေ click
- ကမ္ဘောဒီးယား အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို စိန်ခေါ် click
- Rainbow သတင်း (ရုပ်သံ) click
SEA GAME က နီးလာပါပြီ ၊
သက်ဆိုင်ရာတို.အနေနဲ. အားကစားပွဲများ ကိုနေပြည်တော်
ဦးသန်းရွှေ လက်ထက် နေပြည်တော် လျှမ်း၂ တောက်ဖြစ်
လာရေး ဟာ ယနေ.ခောတ်နဲ. SEA GAME ကိစ္စ မှာ ဆီလျော်မှုမရှိဘူးထင်ပါတယ် ၊
SEA GAME မှာ နေပြည်တော် မှာကြည်.သူတွေမရှိလို.
၀န်ထမ်းများ on juty နဲ. လူရှိအောင် မကြည်.မနေရလုပ်မှာ
အချိန်ရတုန်း ပွဲအချို. (ဘော်လီဘော၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ ရေကူး၊ ပြေးခုန်ပစ် တို.) ကိုရန်ကုန်
မန္တ္နလေး စတဲ. လူဦးရေ များတဲ.မြို.ကြီးတွေမှာစီစဉ်သင်.
လူတွေအားကစားကို စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲတွေ
ကြောင်. စိတ်ဝင်စားမှု မရှိကြချိန်လူနေကျဲပါးတဲ. နေပြည်တော်မှာ sea game
ကအဆင်မပြေလောက်တာ အပြုသဘော တင်ပြတာပါ။
2013 SEA GAME (Myanmar) မှာ အနိုင်အရှုံး ထက်
ခမ်းခမ်းနားနား နဲ. ပွဲကြည်.ပရိသတ် စည်ကားဖို.ကအရေး
ပွဲကြည်.စင်တွေမှာ ကြည်.တဲ.သူမရှိရင် နိုင်ငံအဆင်.အတန်း နဲ.ဂုဏ်သိက္ခာ
genius .. ပြောတာ မှန်ပါတယ် ။
2013 Myanmar Sea Game ကြီး စည်စည်ကားကား
ဖြစ်ဖို. ၊ ပြည်သူတွေ Satisfied ဖြစ်ဖို.၊အားကစားဝန်ကြီးဌာန မှာတင်တာဝန်ရှိတာ
သမ္မတ အပါအ၀င် လွှတ်တော်မှာပါတာဝန်ရှိတယ် ။